Eo An-tànan’ny Governemanta Azerbaijani, Lasa Fampahafantarana Mitondra Ny Mariky ny Firenena Ilay Tantara Noforonina Be Mpankafy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2016 8:15 GMT
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy tamin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Arzu Geybullayeva ito manaraka ito. Naverina nalefa rehefa nahazoana alàlana.
Leyla Aliyeva, zanaka vavin'ny filoha Ilham Aliyev, no lehiben'ny mpanatontosa ilay horonantsary, izay nolazaina ho nitentina 20 tapitrisa dolara ny nanaovana azy. Nalefa voalohany nampahafantarina tao amin'ny Ivontoerana Koltoraly Heydar Aliyev ao Baku io, ary ny Vadin'ny Filoha Mehriban Aliyeva – izay filohan'ny Fondation Heydar Aliyev ihany koa – no anisan'ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpitondra tonga nijery ilay fandefasana voalohany. Taminà fandraisam-pitenenana taorian'ny fandefasana ny sarimihetsika, nisaotra an'i Leyla Aliyeva ny mpamokatra Kris Thykier, izay nilaza fa raha tsy nisy azy, “tsy nisy mihitsy ilay sarimihetsika.” Nisaotra ny Fondation Heydar Aliyev ihany koa i Thykier noho ny fanampiany tamin'ny fandraketana ny sary ary ny Ministeran'ny kolontsaina sy ny Fizahantany. Nanindrahindra be ilay sarimihetsika tamin'ireo media sosialy ireo tomponandraiki-panjakana Azeri, ary niteny tao amin'ny fandefasana voalohany tao New York ny masoivohon'i Azerbaijan any Etazonia, Elin Suleymanov.
Ny iray amin'ireo fotoana vitsy ahafantarana an'i Azerbaijan ho fanjakana Silamo ao anatin'ilay sarimihetsika dia nandritra ilay ampahany nisy paikady ara-politika, raha nilaza izao ilay mpikatroka mafana fo ho an'ny fahaleovantena, Fatali Khan Khoyski: “Tsy tena tsara tokoa ve raha isika no voalohany lasa fanjakana Silamo demokratika ?” Nanaiky i Ali, nilaza fa tokony hiasa hanamboatra “firenena maoderina, mandroso” izy ireo. Tsy misy ao anatin'ny boky ireo andalany rehetra ireo, fa kosa samy maneho ny mariky ny fanjakana ao Azerbaijan.
Fony vao nivoaka ilay sarimihetsika, nibitsika rohy hamerenana hijery an'i Ali sy Nino izay nosoratany ny taona 2000 i Suleymanov, izay ambasadaoron'i Baku any Washington ankehitriny. Tamin'izany famerenana nijery izany, natahotra i Suleymanov fa raha atolotra olona izany, “tsy dia ho raharahiana ny tena fotokevitr'ilay boky aorian'ireo fitsaràna apetraka ankehitriny, ny fahita matetika hoe mifandona ny kolontsaina raha toa ka tokony hifanaraka.”
Voaporofo ilay fampitandremana; ho an'ireo mpanaraka iraisampirenena, lasa nahatonga fandraisana tsy dia nisy fankasitrahana firy ny fanovàna ilay boky ho lasa karazana fandaharana fampahafantarana an'i Azerbaijan maoderina. Toy izao no filazalazàna ilay sarimihetsika avy amin'ny Variety : “tsikombakomba sy fampisehoana, navoaka tamin'ny alalan'ny fifamalian-dresaka amin'ny teny Anglisy tsy hay hazavaina tsy misy maminy zara raha misy poezia, tsy ahitàna na inona na inona afa-tsy soritra lohahevitra ara-kolontsaina, miralenta ary ara-tantara izay zara raha nahasintona kely hijerena azy.” Namarana izao ny Los Angeles Times: “Tsy misy resaka alsimia na fihetsehampo mihitsy amin'io sarimihetsika io, tonga dia azo novinaina mialoha ny ezaka natao, fofompofon'izay zavatra tena tokony ho izy fotsiny.”